Home News Khilaafkii ugu xoogganaa oo ka dhex taagan Al-Shabaab
Saraakiil ka tirsan Ururka Al-Shabaab iyo Ciidamo fara badan ayaa loo diiday iney gallaan deegaano ka tirsan Jubbooyinka oo Al-Shabaab ay ku xooggan yihiin.
Saraakiisha Al-Shabaab ee loo diiday iney gallaan deegaano ka tirsan Jubbooyinka ayaa ka baxay Gobolka Shabeelaha hoose,kuwaasi oo doonayay iney ku biiraan Al-Shabaab kale oo ku sugnaa deegaano hoostada degmada Jilib.
Illo xog ogaal ah ayaa inoo sheegay in Saraakiisha Al-Shabaab ee duleedka Jilib lagu celiyay ayaa waxaa ka mid ah Afhayeenka Guud ee Al-Shabaab Sheikh Cali Maxamuud Raage,waxaana arrintaan loo aaneynayaa Khilaafka iminka ka dhex taagan hogaanka sare ee Al-Shabaab.
Warar maalmihii u danvbeeyay la isla dhexmarayay ayaa sheegaya inuu geeriyooday Hogaamiyaha Al-Shabaab Axmed Diiriye,kaasi oo mudooyinkii danbe xanuunsanayay.
War ka soo baxay Al-Shabaab ayaa lagu beeniyay in Hogaamiyahooda uu geeriyooday uuna noolyahay
Previous articleMagaalooyin Waa weeyn oo dalka Ethiopia ku yaala oo laga cabsi Qabo in Qaraxyo ka dhacaan!!
Next articleQatar oo kooxda Qiyaano Qaran ka dalbatay in Imaaraadka Carabta Culeeys Siyaasadeed la Saaro!!
Khilaaf ka dhex-taagan Hogaanka Baarlamaanka Hirshabeelle